Nagu saabsan - Qingdao Yuanhengtong Makiinado Co., Ltd.
Qaybaha saxda ah
Qaybaha makiinadaha dharka
Qaybaha mashiinka mashiinka nc
Qaybo machining usheeda dhexe
Waxaa la aasaasay 2012, Qingdao Yuanhengtong Makiinado Co., Ltd. wuxuu ku takhasusay R&D iyo soo saarida qalab aan caadi ahayn, iyo qalab si bey'adeed u habboon oo deegaanka loo sameeyo oo loogu talagalay khadadka wax soo saarka otomaatiga ah.
Qaybaha aan caadiga ahayn ee goynta, qaybaha birta ee saxda ah, qaybaha farsamada, makiinadda birta ee aan birta ahayn, soosaarida qeybaha birta ah, farsamaynta iyo farsamaynta qaybaha farsamada. Alaabtu waa in ka badan 1000 nooc. Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhinacyo kala duwan sida qalabaynta, isgaarsiinta, qalabka farsamada, qaybaha gawaarida, iwm. Tayada wax soo saarku waxay ku jirtaa booska hoggaamineed ee dhiggooda gudaha.
Alaabta ceeriin ee la soo saaray waa birta birta ah, birta, naxaasta, aluminium, iwm, kuwaas oo inta badan ku wanaagsan ka shaqeynta qaybaha birta birta ah, ka shaqeynta miiqyada gudaha iyo dibedda, iyo farsamaynta lathe ee naxaasta kala duwan, aluminium iyo birta. Qingdao Yuanhengtong Makiinado Co., Ltd. waxay leedahay awood farsamo oo xoogan. Xarunta mashiinada baaxada weyn ee horumarsan, saxnaanta lathe tooska ah, lathe kontoroolka nambarada CNC, qalabka lathe, qalabka wax lagu shiido iyo qalabka kale ee wax soo saarka taageera, saxsanaanta howshu waxay gaareysaa 0.005 mm, tijaabada u dhigantaana waa dhameystirtay.
Iyada oo khibradeena xirfadeed ee hodanka ah iyo xoogga sayniska iyo teknolojiyada, waxaan si joogto ah u cusbooneysiineynaa, laga bilaabo naqshadeynta wax soo saarka ilaa qaybaha wax soo saarka, si loo siiyo dadka isticmaala wax soo saar heer sare ah. Iyo sumcad wanaagsan iyo adeeg tayo leh, waxaa u xagliya macaamiisha gudaha iyo dibaddaba. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweyneynaa macaamiisha Shiinaha iyo ajaanibta ah inay u yimaadaan maalgashi, amar, ka shaqeynta guddiga, qaabeynta iyo ka shaqeynta. Sameynta mashiinka, ka shaqeynta birta, ka shaqeynta birta, qalabka dhismaha, qalabka birta ka sameysan. Waxaan diyaar u nahay inaan si daacadnimo leh ulashaqeyno asxaabteena gudaha iyo dibaddaba si aan si wada jir ah wax u abuurno!
Tilmaamaha Alaabada - Alaabada Featured - Talooyin Kulul - Khariidadda bogga.xml - AMP Mobile